Don’t TellaSoul (2020) | MM Movie Store
IMDbမှာ 5.9 အထိ ရထားတဲ့ Thriller ကားကောငျးလေးပါ။ဆယျကြျောသကျအရှယျ မကျနဲ့ ဂြိုဝီတို့က နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့အမဖွေဈသူရဲ့ ဆေးဝါးစရိတျတှေ အတှကျ သကျကွီးရှယျအိုတှနေတေဲ့ အိမျကိုလူတှေ မရှိခြိနျမှာ ပိုကျဆံတှေ သှားခိုးကွပါတယျ …
တဈခုခုဆို ကွောကျတတျပွီး ရိုးရိုးအေးအေးလေး နတေတျတဲ့ ဂြိုဝီဟာမကျလို့ ချေါတဲ့ အကို ကွိုးဆှဲရာ ကရတဲ့ ရုပျသေးရုပျလေးဖွဈတယျအကို့ကိုလညျး ကွောကျကလညျးကွောကျ ….ပိုကျဆံသှားခိုးဖို့လဲမိမှာ ကွောကျနရှောတဲ့ ဂြိုဝီဟာအကို ခိုငျးသမြှ ကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့နဲ့ လုပျခဲ့ရရှာပါတယျ ….
ပိုကျဆံခိုးရငျး သူတို့ ညီအကိုနှဈယောကျဟာ လုံခွုံရေး အစောငျ့နဲ့ တှပွေီ့းကိစ်စရပျတှဟော စီစဉျထားသလို ဖွဈမလာခဲ့ရတာကနဒေီဇာတျလမျးလေးကို သဲထိပျရငျဖို အဆုံးထိ ဆှဲချေါသှားပါတယျ….ဝိဉာဉျကိုတောငျမှ ပွောပွလို့မရတဲ့ သဲထိပျရိပျဖိုDrama ကားကောငျးလေး ဖွဈတာကွောငျ့ မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ
IMDbမှာ 5.9 အထိ ရထားတဲ့ Thriller ကားကောင်းလေးပါ။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မက်နဲ့ ဂျိုဝီတို့က နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အမေဖြစ်သူရဲ့ ဆေးဝါးစရိတ်တွေ အတွက် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနေတဲ့ အိမ်ကိုလူတွေ မရှိချိန်မှာ ပိုက်ဆံတွေ သွားခိုးကြပါတယ် …
တစ်ခုခုဆို ကြောက်တတ်ပြီး ရိုးရိုးအေးအေးလေး နေတတ်တဲ့ ဂျိုဝီဟာမက်လို့ ခေါ်တဲ့ အကို ကြိုးဆွဲရာ ကရတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်လေးဖြစ်တယ်အကို့ကိုလည်း ကြောက်ကလည်းကြောက် ….ပိုက်ဆံသွားခိုးဖို့လဲမိမှာ ကြောက်နေရှာတဲ့ ဂျိုဝီဟာအကို ခိုင်းသမျှ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ လုပ်ခဲ့ရရှာပါတယ် ….
ပိုက်ဆံခိုးရင်း သူတို့ ညီအကိုနှစ်ယောက်ဟာ လုံခြုံရေး အစောင့်နဲ့ တွေ့ပြီးကိစ္စရပ်တွေဟာ စီစဉ်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ရတာကနေဒီဇာတ်လမ်းလေးကို သဲထိပ်ရင်ဖို အဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်….ဝိဉာဉ်ကိုတောင်မှ ပြောပြလို့မရတဲ့ သဲထိပ်ရိပ်ဖိုDrama ကားကောင်းလေး ဖြစ်တာကြောင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်